Ma hir-galay baaqii RW Roobe ee xabad joojinta? | KEYDMEDIA ONLINE
Ma hir-galay baaqii RW Roobe ee xabad joojinta?
Kadib 24 saac, hadalkii shalay ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ee ku aadana joojinta hurinta colaaddaha ayaan waxba ka hirgalin, waxaana socda abaabul xoogan oo dhinacyada iska soo hor jeeda ka sameynayaan caasimadda.
Muqdisho, Soomaaliya - Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa shalay ku baaqay hir galinta Saddex qodob oo muhiim ah, si loo joojiyo dagaaladda iyo colaadaha ka curtay magaalada Muqdisho.
RW, Rooble, oo ugu horreyn shegay inuu ka xun yahay waxa dhacay, ayaa dalbaday xabad joojin deg deg ah, in la isugu yimaado wada hadal, wuxuuna Ciidamada Dowladdu ku amray in ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda.
Ku dhawaad Afar iyo labaatan saac oo ka soo wareegatay hadal jeedintii RW Rooble, ma jirto wax hadalkiisii ka hir galay, waxuuna u muuqdaa qof aan lagala tashan arrimaha hadda taagan oo aan go’aan ku lahayn ka talinta aayaha dalka.
Saacado kadib hadalkii Rooble, Madaxtooyada Soomaaliya waxa ay ciidamo soo dul dhoobtay goobihii lagu dagaalamay habeen ka hor, sidoo kale waxaa ciidan laga soo daad gureynayaa gobollada dalka sida Gedo, Hiiraan iyo Galgaduud, si ay qeyb kaga noqdaan dagaallada Muqdisho.
Ma’ahan markii koobaad ee hadalka Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha aan waxba laga soo qaadin, waxuuna idhaha ka daawanayaa qorshe la doonayo in lagu burburiyo deggaanka uu matalo, laguna banneysanyo dhiigga dadka awood qeybsiga u leh, kursiga uu ku fadhiyo.